Shiinaha warshad been abuur ah oo loo yaqaan 'Globe Valve Valve' iyo soosaarayaal | Nortech
Waa maxay API602 been abuur birta adduunka oo dhan?
API602 Faallooyin been abuur ah oo Globe Valve ah waa naqshad gaar ah oo leh cabbirka yar yar ee adduunka.
Sida waalka dunidan, waxay leedahay dhammaan astaamaha baalasha adduunka, dhaqso u furan una dhow.
sida caadiga ah, qaybaha furitaanka iyo xidhitaanku waa iridda, qaab muuqaal ah, taasi waa sababta loogu magac daray waalka albaabka. jihada dhaqdhaqaaqa iridda waxay ku toosan tahay jihada dareeraha. Waalka albaabka ayaa si buuxda loo furi karaa oo gebi ahaanba la xidhi karaa oo aan la hagaajin karin oo la kala qaadi karo. Qalabka waalka ayaa loogu talagalay in loo isticmaalo si buuxda u furan ama gebi ahaanba xiran, sababtoo ah qaabka uukhtarradiisa oo leh qaab xajmi , haddii lagu shaqeyn lahaa qayb ahaan furnaan, waxaa jiri lahaa lumis weyn oo cadaadis ah dusha sare ee xirana waxaa qatar ku noqon doonta saameynta dareeraha.
laakiin API602 bir been abuur ah waxay leedahay astaamo u gaar ah. waxaa lagu sameeyaa birta kaarboon been abuur ah, birta aan xarka lahayn, birta isku darsan, oo leh jir is haysta, oo ku habboon dareeraha cadaadiska sare leh.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee API602 faallooyinka dunta birta been abuurka ah?
Astaamaha ugu muhiimsan ee API602 bir been abuur ah
8) Meelaha wax lagu dhejiyo ee adag ee Satellite-ka waxay keenaan iska caabin dheeraad ah oo lagu gashado, xoqid iyo nabaad-guur dusha sare ee dusha sare.
Faahfaahinta farsamada ee API602 been abuur birta adduunka?
Qeexitaannada API602 bir been abuur ah
Codsiga API602 faallooyinka dunidan birta been abuurka ah
Noocan ah API 602 Faallooyin been abuur ah oo Globe Valve ah waxaa si weyn looga faa'iideystaa dhuumaha leh dareeraha & dareerayaasha kale. Batroolka, saliida, kiimikada, kiimikada kiimikada, tamarta iyo korontada iwm, qaasatan xaaladaha meesha waxtarka qulqulka badan, xirida adag iyo adeega dheer loo baahanyahay. Xulasho ballaaran oo ah qalabka qolofta iyo goynta ayaa daboolaya dhammaan noocyada kala duwan ee codsiyada, laga bilaabo nooca maalin kasta ee adeegga aan-wax-ka-qabashada lahayn illaa adeegga muhiimka ah ee leh warbaahin aad u dagaal badan.
Hore: Faallooyinka birta ah ee been abuurka ah
Xiga: Motorized Resilient Fadhiga Balanbaalis Madax Shiinaha warshad
Dareemay Globe Valve
API602 glove valve
isweydaarsiga shaabad ku xidha waalka adduunka
Electric Globe Madax
Flanged Globe Madax
Cadaadiska Sare ee Glove Valve
Pneumatic Globe Madax
Mawjadaha Globe Madax